२०७५ असोज ५ शुक्रबार, एबरडीन । अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित एक औषधि भण्डारगृहमा कार्यरत एक महिलाले आफ्नै सहकर्मी साथीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । गोली चलाउने महिलाले पनि आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ... बाँकी अंश»
नेपालको सीमावर्ती सहर बहराइचको अस्पतालमा ७१ बालबालिकाको मृत्यु
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, बहराइच, भारत । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको नेपालको सीमावर्ती सहर बहराइचस्थित एक जिल्ला सरकारी अस्पतालमा डेढ महिनाको अवधिमा कम्तीमा ७१ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
एयरपोर्टबाट विमान चोर्न खोजेको आरोपमा २२ वर्षीय छात्र पक्राउ
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, काठमाडौं । अमेरिकाको ओरलाण्डो एयरपोर्टबाट विमान चोर्न खोजेको आरोपमा फ्लोरिडा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका २२ वर्षीय छात्र पक्राउ परेका छन् । ... बाँकी अंश»
बीआरआईको विरोध गर्नेहरु कहिल्यै सफल हुँदैनन् : सि चिनफिङ
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) वा चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपीईसी) को विरोध गर्नेहरु कहिल्यै पनि सफल हुन नसक्ने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
अमेरिका फेरि चीनमाथि खनियो, झोंक रुससँग मिसाइल किनेकोप्रति
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, काठमाडौं । अमेरिकाले चिनियाँ सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
डुंगा दुर्घटनामा परी कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु, दुई सय भन्दा बढी डुबेको शंका
२०७५ असोज ५ शुक्रबार, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाको भिक्टोरिया तालमा डुंगा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ असोज ४ बिहिबार, नागा, फिलिपिन्स । फिलिपिन्सको मध्यक्षेत्रमा बिहीबार गएको पहिरो परी कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने घटनामा दर्जनौँ मानिस घाइते भएका एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
सेसन विरुद्ध खनिए ट्रम्प - “मलाई सहयोग गर्ने महान्यायाधीवक्ता नै भएनन”
२०७५ असोज ४ बिहिबार, वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महान्यायाधीवक्ता जेफ सेसन विरुद्ध फेरि आक्रोस पोखेका छन् । उनले भने, “मलाई सहयोग गर्ने महान्यायाधीवक्ता नै छैनन् ।” ... बाँकी अंश»
बेलायतमा ठुलो आँधी आउने संकेत
२०७५ असोज ४ बिहिबार, काठमाडौं । बेलायतमा ठुलो सामुद्रिक आँधी आउनसक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
फेरि राजनीतिमा आउलान् सरिफ ?
२०७५ असोज ४ बिहिबार, काठमाडौं । आयभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको आरोपमा जेल सजाय पाएका पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई केही राहत मिलेको छ । ... बाँकी अंश»
शान्तिवार्ताका लागि मोदीलाई पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चिठी
२०७५ असोज ४ बिहिबार, काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पुनः शान्ति वार्ता सुरु गर्नका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चिठी लेखेका छन् । ... बाँकी अंश»
कंगोमा डुङ्गा डुब्दा २७ जनाको मृत्यु
२०७५ असोज ४ बिहिबार, काठमाडौं । उत्तर कंगोको मंगला नदीमा एक डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा २७ जनाको ज्यान गएको छ । ... बाँकी अंश»
उत्तर कोरियासँगको वार्ता पुनः सुरु गर्न अमेरिका तयार
२०७५ असोज ४ बिहिबार, काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले उत्तर कोरियासँगको वार्ता पुनः सुरु गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
दशौँ लाख अनियमितताको आरोपमा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री रजाक पक्राउ
२०७५ असोज ३ बुधबार, क्वालालम्पुर । मलेसियाका शीर्ष नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई बुधबार पक्राउ गरिएको छ । राज्यको लगानी कोषको दशौँ लाख रकम अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
सरिफ र छोरी–ज्वाईँको सजाय रोकियो, जेल मुक्त हुँदै
२०७५ असोज ३ बुधबार, एजेन्सी । इस्लामावाद उच्च अदालतले भ्रष्टाचार अभियोगमा दुई महिना अघि जेल परेका पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । ... बाँकी अंश»
नेत्री आङसान सुकीमाथि भरोसा टुट्दै
२०७५ असोज ३ बुधबार, काठमाडौं। प्रजातन्त्रवादीको पर्याय बनेकी नोबेल पुरस्कार विजयी नेत्री आङ सान सुकीमाथि सैनिक तानाशाहीबाट भएका ज्यादतिका कारण अघिल्ला दशकमा सधैंजसो चर्चामै रहने गर्दथ्यो म्यानमार। त्यस समयमा विश्व समुदायबाट म्यानमार लगभग अलग्गिएजस्तो अवस्थामा पनि थियो। सुकीका कारण विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुक र पश्चिमा देशले जुन्ता सरकारको सधैँ विरोध गर्ने गर्दथे। ... बाँकी अंश»
अफगान राष्ट्रपति घानी भारतमा, इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नागरिक सम्मान
२०७५ असोज ३ बुधबार, नयाँदिल्ली। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अस्रफ घानी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्न बुधबार नयाँदिल्ली आएका छन्। एक दिवसीय उक्त भ्रमणका अवसरमा उनीहरुबीच क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार र अफगानिस्तानमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास कार्यक्रमका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। ... बाँकी अंश»
के चीनको ऋणमा रुमल्लिँदै छ माल्दिभ्स ?
२०७५ असोज ३ बुधबार, काठमाडौं । माल्दिभ्स राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा होमिएको छ । आइतबार हुने निर्वाचनले माल्दिभ्सको लागि नयाँ कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको चयन गर्नेछ । ... बाँकी अंश»
परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि उत्तर कोरिया तयार : दक्षिण कोरिया
२०७५ असोज ३ बुधबार, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाइ इनले उत्तर कोरिया परमाणु निशस्त्रीकरणका लागि तयार रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
छ वर्षे बालकमाथि सात कुकुरको हमला
२०७५ असोज ३ बुधबार, काठमाडौं । कुकुरले बालकमाथि आक्रमण गरेर गम्भीर बनाएको छ । भारतको भोपालस्थित केन्द्रीय जेलको नजिकै रहेको गोकुलधाम कोलोनीमा ६ वर्षे बालकमाथि ७ कुकुरले आक्रमण गरेका थिए । ... बाँकी अंश»